République du Cameroun (ပြင်သစ်) Renndaandi Kamerun (Fula)
ပညာရေး နှင့် ကျန်းမာရေးပြင်ဆင်
စီးပွားရေး နှင့် အခြေခံ အဆောက်အအုံပြင်ဆင်
ဂီတ နှင့် အကပြင်ဆင်
ပြည်တွင်း အနုပညာ နှင့် လက်မှုပညာပြင်ဆင်
↑ ၁.၀၀ ၁.၀၁ ၁.၀၂ ၁.၀၃ ၁.၀၄ ၁.၀၅ ၁.၀၆ ၁.၀၇ ၁.၀၈ ၁.၀၉ ၁.၁၀ ၁.၁၁ ၁.၁၂ Cameroon။ World Factbook။ CIA။ 24 September 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၈၇.၀ ၈၇.၁ Musa, Tansa (27 June 2007). "Gunmen kill one, kidnap 22 in Cameroon near CAR". Reuters. Accessed 27 June 2007.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကင်မရွန်းနိုင်ငံ&oldid=705741" မှ ရယူရန်